10 -ka Barnaamij ee ugu Fiican ee Nintendo Switch ee 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 10 Barnaamijyada ugu Fiican ee loogu talagalay Nintendo Switch 2022
10 Barnaamijyada ugu Fiican ee loogu talagalay Nintendo Switch 2022
Nintendo Switch wuxuu siiyaa marin u hel ciyaar aad u fara badan, laakiin kumbuyuutarku wuxuu awood u leeyahay wax ka badan ciyaar uun. Ma aha oo kaliya iibinta dabocase iyo samatabbixinta amiiradaha qoolleyda sunta ah.
Haddii aad xiisaynayso waxa kale ee Beddelkaagu samayn karo, akhri oo waad ku farxi doontaa inaad samaysay.
Maqaalkaan, waxaan ku sameynay dib -u -eegis 10 -ka barnaamij ee ugu fiican Nintendo Switch waxaad aadi kartaa 2022 -kan.
Waa maxay Nintendo Switch?
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Nintendo Switch
10 Barnaamijyada ugu Fiican ee Nintendo Switch
#4. RPG Sameeyaha MV
#5. Qalabka KORG
#7. Midabada Ku Nool
#9. Silsiladda Astral
#10. Buugga midabaynta
Wareejinta Nintendo, sida laga soo xigtay Wikipedia, waa qalabka ciyaarta fiidiyowga ee ay soo saartay Nintendo oo laga sii daayay inta badan gobollada adduunka. Console -ku waa kiniin la xidhmi karo oo loo adeegsan karo konsole guri ama unug gacan -qabsi ah, taasoo ka dhigaysa konsole isku -jira.
Xakameeyayaasheeda Joy-Con ee wireless-ka ayaa leh badhamada joogtada ah iyo ulaha analogga jihada ee soo-gelinta adeegsadaha, dareenka dhaqdhaqaaqa, iyo jawaab-celinta taabashada.
Waxay sidoo kale ku dhejin karaan qalabka wax lagu qabsado si ay u bixiyaan qaab -dhismeedka ciyaarta qalabka koonsoolka guriga, ama waxaa loo adeegsan karaa si gooni gooni ah dhinaca, oo la mid ah Wii Remote iyo Nunchuk, oo taageeraya qaababka badan ee maxalliga ah.
Softiweerka ku yaal Nintendo Switch wuxuu taageeraa ciyaarta khadka tooska ah iyada oo loo marayo isku -xirnaanta internetka, iyo sidoo kale isku -xirka xayeysiiska wireless -ka ee maxalliga ah oo leh konsoleyaal kale.
Ciyaaraha Nintendo Switch iyo codsiyada waxaa laga heli karaa labada kartridda ROM-ku-saleysan ee toosh-ku-saleysan iyo digitally ka Nintendo eShop; qalabku waa gobol la'aan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo xiiso leh iyo astaamo ninetendo biiro ayaa leh taas oo ka dhigtay mid aad loo jecel yahay marka loo eego consoles -yada ciyaaraha kale.
Waxay leedahay Ciyaar Is -dhexgal badan: Nintendo Switch wuxuu leeyahay noocyo kala duwan ciyaaraha isdhexgalka dhowr qof isla markiina wuu ciyaari karaa. Waxaad si fudud ugu ciyaari kartaa qoys ahaan, saaxiibbo, ama saaxiibbo.
Wuxuu siiyaa qolka Hal -abuurka: Iyada oo la beddelo Nintendo, carruurtaadu waxay noqon karaan kuwo hal -abuur leh aaladaha dhismaha. Waxay dhisi karaan ciyaaraha kalluumeysiga, kontoroolada mootada, biyaano, ama robots. Dhab ahaantii, waxaa jira wax badan oo ay dhisi karaan.
Ciyaaraha Firfircoon: Nintendo waxay leedahay ciyaaro kaa dhigi kara kuwo firfircoon oo firfircoon.
Waa kan liiska 10 barnaamijyo ugu fiican ee Nintendo Switch oo aad soo dejisan karto tan 2022:
RPG Kan sameeyey MV
Weligaa ma seegi doontid dhacdo qabatinka cusub ee qaboojiyaha biyaha leh barnaamijka qulqulka fiidiyaha Hulu. In kasta oo barnaamijku xor u yahay in la soo dejiyo, Hulu waa adeeg ku-qoris ku saleysan.
Tan micnaheedu waa inaad bixin doontaa khidmadda rukunka bil kasta si aad marin ugu hesho maktabadda weyn ee agabka. Markaan idhi, waxaa jira tijaabo toddobo maalmood oo bilaash ah haddii aad rabto inaad tijaabiso.
Barnaamijka Hulu Switch waa fududahay in la isticmaalo wuxuuna aad ugu eg yahay barnaamijka moobiilka ee Hulu. Mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ayaa ah kartida lagu kala beddeli karo habka la qaadan karo iyo kan xiran.
Hulu waxay ka soo muuqataa shaashaddaada TV -ga marka la xidho. Waxa kale oo aad ka saari kartaa Beddelkaaga dekadda oo aad sii wadi kartaa daawashada Hulu qaab la qaadan karo adiga oo aan ka boodin garaac.
Waxaad daawan kartaa dhammaan waxyaabaha Hulu ka kooban tahay $ 8 bishii, laakiin waxaa jira xayeysiisyo. Haddii aad rabto muuqaalka tooska ah, waxaad ku iibsan kartaa qorshahooda Hulu+Live $ 40.
Barnaamijkan, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku jira xayeysiisyo. Haddii aad neceb tahay xayeysiisyada, dooro qorshaha maalinlaha ah ee Hulu $ 12 ama qorshaha $ 44 billaha ah ee Hulu+Live.
Akhri Sidoo kale: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Hulu Vs Netflix | Doorashadayda Tan
Marka laga hadlayo aaladaha qulqulka, YouTube ayaa sidoo kale loo heli karaa Nintendo Switch. Isticmaalka joystick-ka bidix ee Switch-ka ama D-pad si aad u dhex gasho YouTube-ka ayaa laga yaabaa inay marka hore dareento waxoogaa qallafsan, laakiin si dhakhso leh ayaad ula qabsan doontaa.
Isticmaalayaasha ayaa waliba geli kara koontadooda Google iyagoo adeegsanaya barnaamijka YouTube si ay u arkaan waxyaabaha la habeeyay sida kanaalada ay iska diiwaan geliyaan iyo fiidyowyada lagu taliyay.
Markaad daawaneyso fiidiyowyo 360 °, mid ka mid ah astaamaha aadka u xiisaha badan ee barnaamijka YouTube ee Beddelka ayaa soo gala ciyaarta.
Joysticks -ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu duubo hareeraha fiidiyaha. Waxaa la yaab leh, tani si aad ah ayay u shaqaysaa waxayna dareentaa in ay caadi tahay. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale isku dhejin kara taleefanka gacanta si ay ugu adeegsadaan kontoroolka fog.
YouTube gabi ahaanba waa bilaash waxayna samaysaa wax kasta oo ay awooddo, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee Nintendo Switch ee maanta la heli karo.
Dhibaatada kaliya ee barnaamijkan ayaa ah in algorithm -ka YouTube -ka uu ku talin karo fiidiyowyo laga yaabo inaysan u fiicnayn adeegsadayaasha da'da yar.
Haddii aad jeceshahay buugaagta majaajillada ah, waxaad u badan tahay inaad fiiriso InkyPen. Barnaamijku wuxuu isku daraa akhristaha majaajillada dhijitaalka ah ee dijitaalka ah wuxuuna ku dukaameeyaa muuqaal soo jiidasho leh oo si sahlan loo isticmaali karo.
Isticmaalayaasha barnaamijka Inkypen waxay baari doonaan kumanaan majaajilo oo ka socda daabacayaasha reer Galbeedka iyo kuwa Bariga. Tan waxaa ku jira cinwaannada daabacayaasha waaweyn sida IDW, Dark Horse, iyo Valiant.
InkyPen sidoo kale waxay leedahay manga aad u fara badan, waxaa xushmad u leh Kodansha, oo ah daabacaha manga ee labaad ee ugu weyn dunida. Nasiib darro, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya maktabadda ballaaran ee InkyPen - Marvel iyo DC.
Akhriste ahaan, waxaad ku qabsan kartaa Beddelka si siman ama qumman. InkyPen ayaa sidoo kale u oggolaanaysa dadka isticmaala inay majaajilladooda u akhriyaan bogag dhan, oo ay markaa ku soo jiidi karaan, ama taxane ah guddiyaal isdaba -joog ah.
Xusuusnow, InkyPen wuxuu u baahan yahay isdiiwaangalin bille ah $ 7.99.
Akhri Sidoo kale: Ku Ciyaar Kaararka Kaararka Hadiyadaha: 31 Codsi oo shaqeynaya 2022
RPG Maker MV waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loo beddelo Nintendo oo si weyn loogu isticmaalo ciyaaraha sida Final Fantasy, Chrono Cross, Legend of Dragoon, ama (dabcan) The Legend of Zelda.
Barnaamijkan wuxuu leeyahay nooc PC ah oo kuu oggolaanaya inaad naqshadayso oo aad isticmaasho dabeecadahaaga gaarka ah, halka nooca Beddelka uusan lahayn.
Waxaad sidoo kale ka dooran kartaa kumanaan hanti si aad u kala saarto oo aad u dhisto jannadaada tifaftiran. Midda labaad, waxaa jira sheekada qorista sheekada abuurista ciyaar, iyo sidoo kale wada hadal kasta oo loo baahan yahay si jilayaasha nolosha loogu soo saaro.
Kuwani dhammaantood waa xirfado leh codsiyo dunida dhabta ah kuwaas oo bixin kara habab madadaalo iyo hal-abuur leh ee waxbarashada guriga. Xusuusnow, rukhsadda Sameeyaha RPG waa $ 49.99.
Ma rabtaa inaad samaysato muusig kuu gaar ah? Adigoo adeegsanaya barnaamijka KORG Gadget, waxaad si dhakhso leh u bilaabi kartaa inaad muusig ku samayso Nintendo Switch -kaaga.
KORG Gadget waa goob maqal dhijitaal ah oo dhijitaal ah oo aad u qurux badan (DAW) oo ay ku jiraan lix iyo toban farsameeyayaal kala duwan. KORG Gadget ayaa hore loogu sii daayay Mac iyo macruufka, halkaas oo ay ku kasbatay sumcad sida aalad wax soo saar muusig oo aad u wax ku ool ah.
Nooca Beddelka ee Gadget wuxuu ka hooseeyaa kuwii ka horreeyay, laakiin wali waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo halabuurka asalka ah.
Intaas waxaa sii dheer, iyada oo lagu daro hab iskaashi, Korg Gadget wax soo saarka muusikada. Tani waxay awood u siineysaa ilaa afar ciyaartoy inay isku mar maamulaan qeybaha kala duwan ee heesta.
Intaa waxaa dheer, Joy-cons-ka Beddelka waxaa loo isticmaali karaa in lagu kabo qabanqaabada. Tilmaan Joy-con, tusaale ahaan, waxay hagaajin doontaa garoonka ama dhererka mawjada. Tani waxay KORG Gadget ka dhigeysaa mid aad u fudud in la isticmaalo, in kasta oo aadan waligaa hore u isticmaalin DAW.
Faa'iidada kaliya ee KORG Gadget ee Beddelka ayaa ah qiimaheeda sare. Barnaamijku hadda waa $ 48 waqtiga daabacaadda.
Haddii aad ku raaxaysatay awoodda aad ku naqshadayn karto koorsooyinkaaga Mario ee Super Mario Maker, waxaad u baahan doontaa inaad fiiriso Fuze4. Isticmaalayaashu waxay adeegsan karaan barnaamijka Fuze4 si ay u sameeyaan 2D ama 3D ciyaaro gaar ah.
Fuze4 wuxuu fuliyaa tan isagoo bara dadka isticmaala sida loo codeeyo. Waa in la xusuusnaadaa in Fuze4 uusan u ahayn kuwa si fudud u baqaya. Qalooca barashada ayaa si xarago leh halkan ugu dheer.
Waxay bari kartaa kuwa bilowga ah aasaaska koodh -siinta, laakiin koodhadheyaasha halista ah ee garanaya waxay samaynayaan ayaa ka faa'iidaysan doona.
Markaan idhaahdo, qaybta wax -barashada Fuze4 waxay qabataa shaqo hufan oo ah in walxaha loo kala jebiyo qaybo badan oo la maareyn karo.
Colors Live waa barnaamij farshaxan oo hal-abuur ah oo loogu talagalay Nintendo Switch. App -ka waxaa lagala soo bixi karaa Dukaanka Live Colors.
Haddii aad baakad ka iibsato baakad, waxaad marin u heli doontaa abka iyo sidoo kale aalad qabow si ay kaaga caawiso inaad ku sawirto Beddelkaaga (inbadan ka sii hoose).
App -ka ayaa ah halka fikradaha ay ku noqdaan shaqooyinka dhabta ah ee farshaxanka dhijitaalka ah. Waxaad u isticmaashaa shaashaddaada Beddelka sidii kiniin garaafyo ah, oo leh shaashadda taabashada.
App -ku wuxuu kaloo farshaxanka u rogaa ciyaar. Tusaale ahaan, waxay kugu xujeyn kartaa inaad sawir dhab ah ka samayso xayawaanka duurjoogta ah ee hawdka ku jira adigoo adeegsanaya aaladaha aasaasiga ah iyo midabada oo kaliya.
Kani waa hab aad u fiican oo lagu barto sida loo isticmaalo app -ka iyadoo sidoo kale la hagaajinayo xirfadahaaga farshaxanka dhijitaalka ah.
Mar labaad, Beddelka caadiga ah ayaa ah ikhtiyaarka muuqda sababtoo ah baaxadda shaashadda taabashada iyo kartida adeegsiga shaashad weyn. Software -ka waxaa loogu talagalay inuu ku shaqeeyo kombiyuutar loo yaqaan SonarPen.
Tani waxay ku xirtaa dekadda taleefanka madaxa ee Switch, ka dibna waxaad u adeegsan kartaa SonarPen si aad ugu sawirtid shaashadda taabashada Switch -kaaga oo leh xoogaa farsamo casri ah.
Ma aha oo kaliya, laakiin SonarPen waa mid xasaasi ah, taas oo u oggolaanaysa inay u beddesho dhaqdhaqaaqyadaada muraayadda burushka rinjiga ee kala duwanaansho-baxa ama siiso burushka dhuxusha muuqaal dhab ah.
Piano, oo ah barnaamij kale oo muusig la xiriira, ayaa ah barnaamijka Nintendo Switch ee aasaasiga ah oo sameeya sida uu sheegayo. Barnaamijkan, oo la sii daayay sannadkan, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku ciyaarto piano dalwaddii meel kasta illaa intaad haysato Beddelkaaga.
Waxay u rogeysaa qalabkaaga koonto, oo kuu oggolaanaya inaad ciyaarto markasta oo niyadda ku dhufato.
Tani sidoo kale waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee Nintendo Switch ee bilowga ah. Haddii aad tahay qof biloow ah ama aad rabto inaad barato sida loo ciyaaro biyaano, Piano waxaa ku jira casharro loogu talagalay fasallada.
Waxa kale oo ay leedahay hab ciyaar bilaash ah. App -kan waa mid aan qiimo lahayn qiimahiisa, gaar ahaan haddii aad carruur leedahay. Waxaad ku heli kartaa barnaamijka Piano $ 9.99.
Astral Chain waa ciyaarta ugu dhammaystiran sababta oo ah muuqaalladeeda cajiibka ah, soo bandhigidda goob aad u fiican, ciyaar -ciyaar kala duwan, iyo nidaam dagaal oo qoto dheer oo xiiso leh.
Wuxuu isku daraa shaqada dambi baaraha iyo dagaalada kacsan. Hal -abuur leh, firfircoon, iyo, laga yaabee ugu muhiimsan, si fudud qabow oo cajiib ah.
Ciyaartoyda qaar ayaa laga yaabaa inay ku adkaadaan nidaamka badan ee ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, caawinta iskaashatooyinka iyo awoodda ay u leeyihiin inay si otomaatig ah u farsameeyaan dhowr makaanik ayaa ku siin doona inaad ku raaxaysato ciyaarta xitaa haddii aad tahay qof bilow ah.
Astral Chain ma aha oo kaliya mid ka mid ah cayaaraha Switch ee ugu fiican, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah cayaaraha fiidiyaha ugu fiican.
Midabaynta Buuga waa mid ka mid ah barnaamijka ugu fiican ee Nintendo Switch kaas oo kaa caawin kara inaad ka saarto xoogaa uumiga. Waxa ku jira bogag badan oo sawirro ah si aad u sawirto wayna fududahay in la isticmaalo, si ka duwan abka kale.
Waxaad heli kartaa midabyo iyo qalab kala duwan. Tani waxay ka dhigan tahay inaad hagaajin karto mugdiga midabadaada iyo sidoo kale dhumucda khadadkaaga markaad ku rinjiyeysid.
Caqabadda kaliya ayaa ah inaad midabka kaliya ku dhex midabayn karto.
Sida Loo Iibiyo Jabkaaga Labtop-ka Degdega ah
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha Hulu Vs Netflix | Doorashadayda Tan
Dardaaranka Online ma Sharcibaa? 10ka Online ugu Fiican ee Sameyn Doona 2022
Barashada dhaqaalahaaga maaha shaqo maalin ah. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ku heli karto…
Good Will Hunting waa filim ku saabsan ilaaliyaha da'da yar ee MIT oo la yiraahdo Will Hunting kaasoo lahaa…
Ma doonaysaa in aad xil iska saarto oo aad bilawdo ganacsigaaga hantida maguurtada ah intii aad noqon lahayd…
Sida Loo Noqdo Falanqeeye Maaliyadeed 2022
Falanqeeyayaasha maaliyadeed waa khabiiro loo xilsaaray inay isticmaalaan xogta maaliyadeed ee shirkadda si ay u bixiyaan ikhtiyaarrada…